KingCom DJ Bulb Party-L05 Bluetooth Speaker | Buy online | SHOP.COM.MM
KingCom DJ Bulb Party-L05 Bluetooth Speaker
Wireless Call, Free Communication
တကယ်မိုက်တဲ့ မီးလုံးစပီကာလေး ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနော်
သီချင်းဖွင့်လို့လည်းရ မီးလည်းလင်းတော့ စွန်းကြိုက်တယ် ဖုန်းကလေးပွတ်ပြီးထိန်းချုပ်ရုံပဲ Read more Hide
သီချင်းလည်းနားထောင် ရောင်စုံမီးတွေလည်းလင်းဆိုတော့က ကလပ်ထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတယ် ဖုန်းထဲကနေထိန်းချုပ်နေရုံပဲ ပစ္စည်းအာမခံကလည်း တစ်နှစ်ကြီးများတောင်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရတာတန်ပါတယ်လေ Read more Hide
မီးလုံး စပီကာ ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဖူးသေးတယ် အံ့သြစရာကောင်းတယ်
ဖုန်းထဲကနေအမျိုးမျိုးဆော့လို့ရတယ် Read more Hide
ဖုန်းထဲကနေ APK သုံးပြီး မီးရောင်စုံတွေကြိုက်သလိုပြောင်းရတယ်
သီချင်းတွေလည်းဖွင့်လို့ရတယ် အရာအားလုံးက သင့်လက်ထဲမှာ .... Read more Hide
ဆန်းပြားတဲ့ပစ္စည်းလန်းလန်းလေးပါ မီးရောင်စုံတွေရော သံစဉ်တွေရော ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးဆော့လို့ရတော့ အရမ်းအရမ်းမိုက်ပြီလေ Read more Hide
DJ Bulb တဲ့လား
တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးတဲ့ တီထွင်မှုပဲ။ ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်ပြီး မီးရောင်တွေ ကစားလို့ရတယ်။ သီချင်းတွေ နားထောင်လို့ရတယ် ဆိုတော့ excellent လေ Read more Hide
With speakers by KingCom, you'll be able to listen to your music with crystal clear sound instead of giving pressure to your ears with headphones. It'saperfect fit for your room without taking place. It allows you to stream music from your phone, tablet, computer or mp3 player via bluetooth. This product is available now at shop.com.mm online shopping mall.
DJ Bulb Party-L05 Bluetooth Speaker + Free Gifts (Cleaner Kit + Water Bottle)
Specifications of DJ Bulb Party-L05 Bluetooth Speaker